Xog cusub oo laga helayo Qaraxii Xalay ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xog cusub oo laga helayo Qaraxii Xalay ka dhacay Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxa oo ahaa mid lala damacsanaa in lagu dilo wasiir ku xigeenka wasaaradda Amniga Soomaaliya, balse uu ka badbaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay qaraxii Xalay Fiidkii ka dhacay Isgoyska Taleex, ee magaaladda Muqdisho, kaasoo uu ku dhintay mid kamida howlwadeenada Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya.
“Wasaaradda Cadaaladda waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa ehelkii iyo qaraabadii uu kabaxay Marxuuma Ilyaas Maxamed Sheekh Cabdikariim oo kamid ahaa Shaqaalaha Wasaaradda Cadaaladda, wuxuuna ahaaya Shaqsi Allah kusifeeyey akhlaaq iyo howl-karnimo, waxaana Allah uga baryeynaa inuu Naxariistiisa kawaraabiyo, anakana Samir iyo iimaa” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda Xasan Xuseen.
Marxuum Ilyaas geeridiisa waxay qabsatay xalay baraha bulshada, wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo dhawaan jaamacad kasoo baxay islamarkaana u shaqeynayay dalka, laakiin uu ku dhintay fal argagaxiso oo loo maleegay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga Cabbdinaasir Saciid Muuse (Bahaay).
Muqdisho waxaa tobaadkii hore ka dhacay qarax Is-miidaamin ah, oo loo adeegsaday Gaari lagu soo xiray walxaha qarxa kaasoo la rabey in lagu dilo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jen Odowaa Yuusuf Raage, balse uu ka badbaaday weerar. Qof dhalinyaro shacab ah oo wadada Tarabuunka marayay ayaa ku dhintay.
0 Comments Topics: al shabaab muqdisho odowaa yuusuf qarax